"I-Sun Fakeer" i-Studio # 400-sleeps 3 - I-Airbnb
"I-Sun Fakeer" i-Studio # 400-sleeps 3
IYUNITHI ENGCONO KAKHULU KUYO YONKE I-INN E-SEacrest. Ukubukwa okuqhubekayo nokuqhubekayo.
QAPHELA: I-INN AT SEACREST YI-LUXURY INN/ISITAYELA SEHHOTELA AMAYUNITHI E-STUDIO.. ANGAMAFIDI-SKWELE ANGU-350. LAWA MAGUMBI E-INN ASENDAWENI EKAHLE KAKHULU. YIBA NENDAWO YOKUBHUKUDA EHAMBA PHAMBILI NOBHAVU WAMANZI ASHISAYO.
I-Inn At Seacrest inamakamelo anohlobo lwehhotela aphakathi kwe-Rosemary ne-Alys Beach ngasentshonalanga ne-Seacrest Beach ebheke i-Alys Beach, 30A, nebhishi elihle nolwandle. Isitezi sesine, i-West corner, ukugoqa OKUKHULU kwe-balcony nokubukeka kwe-gulf ecacile, i-Alys Beach, i-Seacrest Beach, ne-pool ne-spa. Ngempela indawo engcono kakhulu esakhiweni, akukho okunye okuqhathaniswa.
Le-studio, i-inn unit, ithatha izivakashi ezifika ku-3 ngombhede omkhulu, kanye ne-futon yokulala yezingane ezincane ezihamba nabantu abadala.
Le-studio sinomatilasi omusha SHA we-king pillow kanye ne-twin futon ENTSHA SHA ngo-May 2020. Le yunithi ihlala phakathi kwamakhaya ezigidi zama-dollar ngengxenye yenani. Ilungele abantu abashadile abafuna indawo yokuhlala ethokomele ngaphandle kokwaphula ibhange.
I-condo ibheke izindawo zamabhayisikili eceleni kwe-30A esplanade eya e-Alys Beach. Hamba uye kuzo zonke izindawo zokudlela ezinhle e-Alys nase-Rosemary Beach. Ukufinyelela Ebhishi e-Seacrest Beach ngezinyawo, noma nge-Tram egijima unyaka wonke, noma uhambe ngemoto emfushane uya ebhishi e-Inlet ukuze uthole enye yezindawo ezinhle kakhulu namabhishi omphakathi e-Florida.
LeGem yendlu iyinani elikhulu kakhulu futhi inikeza ubulula obumangalisayo. Uthole indawo yakho ebhishi!!
Le ndlu yohlobo lwe-Inn e-Seacrest iyunithi ecishe ibe ngu-14x25 futhi inikeza ngamafidi angu-350 sq wendawo.
Ikhishi elincane linompheki ophezulu, ifriji, i-microwave, umshini wokwenza ikhofi, i-blender. Ayinawo uhhavini. Sinikeza Amashidi, ubhavu namathawula ezandla. Izivakashi zinikeza amathawula azo asebhishi.
Azikho IZILWANE EZIFUYWAYO,akukho UKUBHEMA, ukushaya, noma IZIDAKAMIZWA EZINGEKHO EMTHETHWENI
Ngicela ungangabazi ukuxhumana nami uma kukhona imibuzo.